Uboya bejezi yeHacci
Ilaphu lePonte Roma
4 indlela yolula Ilaphu
Shaoxing ishishini lamalaphu yanamhlanje
ngu admin nge 21-04-10
"Namhlanje ixabiso lemveliso yelaphu eShaoxing limalunga neebhiliyoni ezingama-200 zeeyuan, kwaye siza kufikelela kwi-800 yeebhiliyoni zeeyuan ngo-2025 ukwakha iqela lemizi-mveliso yamalaphu yanamhlanje." Ixelelwa ngumlawuli wezoQoqosho kunye noLwazi lweBureau yesixeko saseShaoxing, ngexesha lomsitho weShaoxing yanamhlanje ...
Kutshanje, iziko lokuthenga ilaphu lamazwe ngamazwe laseTshayina……
ngu admin nge 21-01-10
Kutshanje, iziko lokuthenga amalaphu ehlabathi lase China Textile City libhengeze ukuba oko kwavulwa ngoMatshi kulo nyaka, umndilili wokuhamba kwabakhweli bemihla ngemihla kwintengiso ungaphaya kwamaxesha angama-4000 abantu. Ukusukela ekuqaleni kukaDisemba, ingeniso eqokelelweyo idlule kwi-10 yeebhiliyoni zeeyuan. Af...
Amathuba aqulathe ukuqaqamba, ukusungula izinto ezintsha kwenza impumelelo enkulu……
Amathuba aqulathe ukuqaqamba, ukusungula izinto ezintsha kwenza impumelelo enkulu, unyaka omtsha uvula ithemba elitsha, ikhosi entsha inamaphupha amatsha, u-2020 ngunyaka obalulekileyo kuthi wokudala amaphupha kwaye sihambe ngenqanawa. Siya kuxhomekeka ngokusondeleyo kubunkokeli benkampani yeqela, sithathe ukuphuculwa kweenzuzo zoqoqosho njengoko c...
Kwiminyaka yakutsha nje, indlela yophuhliso yokuthunyelwa kwempahla ngaphandle kwe-China ilungile……
Kwiminyaka yakutshanje, indlela yophuhliso yokuthunyelwa kwelaphu yaseTshayina ilungile, umthamo wokuthunyelwa kwempahla kwamanye amazwe uyanda unyaka nonyaka, kwaye ngoku ubambe isahlulo sesine somthamo wokuthunyelwa kwempahla kwamanye amazwe. Ngaphantsi kweBelt and Road Initiative, ishishini lelaphu laseTshayina, eliye lakhula...
Idilesi: No.70,Haitang Road,Paojiang Zone,Shaoxing City,China.
Umnxeba: 0086 17867857231